Kooxda Manchester United oo ku badisay shan gool markii ugu horaysay tan iyo intii uu ka tagay Sir Alex Ferguson. | Somaliland Mirror
Home WARARKA Kooxda Manchester United oo ku badisay shan gool markii ugu horaysay tan iyo intii uu ka tagay Sir Alex Ferguson.
Kooxda Manchester United oo ku badisay shan gool markii ugu horaysay tan iyo intii uu ka tagay Sir Alex Ferguson.
Manchester(somalilandmirror.com)-Kooxda Manchester United ayaa ciyaartii ugu horaysay ka dib uu tababare u noqday Ole Gonar Solskiar guul wayn ka keentay ciyaartaas.
Manchester United ayaa ku badisay 5/1 shan gool dhalisay , halka hal gool laga dhaliyay.
tirada shanta gool ee ay Manchester United ku badisay ayaa noqonaysa markii ugu horaysay ay ciyaar kaliya shan gool ku dhaliyaan tan iyo intii uu ka tagay tababarihii waynaa ee Sir Alex Ferguson.
Ciyaartoyga Manchester United ayaa u muuqday ciyaartooy aad u ordaya oo la moodayo sidii ciyaartooy dhiig cusub lagu shubay.
khubarada ciyaaraha (premier league) faaleeya ayaa ciyaarta ka dib is waydiiyay sirta keentay isbadalka ku yimi ciyaartooyga, islamarkaana waxa ay xuseen laba qodob oo kala ah, in tababarihii hore Jose Mourinho uu ciyaartoyga kaarta xidh xidhaysa oo u diidaysa inay weeraro qaadaan ku ciyaarsiin jiray, iyo in Ciyaartoygu ay isku dhaceen tababarihii hore Jose Mourinho ka dibna ay u ciyaari waayeen ama ayna daacad u ahayn.
si kastaba ha noqotee Kooxda Manchester United iyo tababaraha cusub Solskiar oo ah ciyaartoy hore oo Manchester United ah, ayaa ku taamaya in ay soo celiyaan kooxdii Manchester United ee la yaqaanay, yagoo soo bandhigaya ciyaar taageerayaashooda kaga farxinaysa oo weerar iyo goolal dhalin badan leh.
Previous PostDaawo: Haayadda Barakacaayasha iyo Qaxoontiga Somaliland oo Soo Bandhigtay Qorshayaasha ay ku Shaqaydoonto 3 Sano ee Soo Socda Next Post"Somaliland does have a legal argument" states, US Assistant Secretary for Africa.